Maatadii Mareykanka laayay oo Magdhaw & Cadaalad helin | KEYDMEDIA ONLINE
Khasaarooyinka rayidka ayaa wali kasii kordhayo dagaalka qarsoon ee militariga mareykanka uu ka wado soomaaliya, iyadoo aan wax cadaalad ah ama magdhaw ah loohelin dhibanayaasha.
Labadii bishii Febuary, abbaare 8-dii fiidnimo, qoys ka kooban shan ayaa iyagoo u fadhiyey casho magaalada Jilib, ee gobolka Jubbada Dhexe ay duqeysay diyaarad drone ah oo Mareykanka leeyahay.
Diyaaradda ayaa gantaal noociisu yahay US GBU-69/B (Sida loo aqriso: US Jii Bii Yuu), islamarkaana culeyskiisu ahaa 18-KG ku dhufatay Guriga, waxaana goobta ku dhimatay Nuurto Kusow Cumar oo 18 jir ahayd, iyadoo ay ku dhaawacmeen labo gabdhood oo la dhashay, oo lagu kala magacaabo Faadumo [12 jir] iyo Cadeey [7 jir] iyo ayeydeeda Khadija Mohamed Gedow, oo jirtay 70 sano.
Aabaha gabdhaha, Kusow Cumar Abuukar, oo ah 50-jir beeraleey ah oo guriga ku sugnaa, ayaa yiri “Waligey uma maleynaynin inay ina soo garaaceyso diyaarad. Waxaan si lama filaan ah u maqlay dhawaq weyn kadibna gantaal ayaa lagu dhuftay gurigeenii, Ciidda iyo qiiqa ayaa indhahayga buuxiyey. ”
Guud ahaan weerada sanadkii 2019 waxay gaarayaan 63, waxaana lagu dilay 2 qof oo shacab ah oo lagu duqeeyay Feb. 23 duleedka degmada Kunya-Barrow, sida uu qirtay Militeriga Mareykanka. Tirada runta ah ayaa lagu qiyaasayaa 75 Shacab labadii sanno ee lasoo dhaafay.
Bishii xigtay, 18 March 2019, diyaarad drone ah ayaa gantaal ku dhufatay gaari Toyota Surf SUV oo ku safrayay nawaaxiga degaanka Cabdow-Dibille, oo 5-KM u jira Afgooye, waxaana lagu dilay weerarka saddex qof oo beertooda ka yimid kuna sii jeeday Muqdisho.
Sanadkii 2018, waxaa ka dhacay Soomaaliya 47 duqeyn, halka 34 weerar sanadkii ka horeeyay ee 2017.
Howlgallada qarsoodiga ah ee Militeriga Mareykanka ayaa la kordhiyay sanadkii 2017, kadib markii Trump oo xiligaasi xafiiska ku cusbaa bixiyay amar lagu xoojinayo duqeymaha laga fuliyo goobo Koonfurta Soomaaliya ku yaalla, oo u calaamadeeyay meelo cadowga argagaxisada ku badan yahay.
Amnesty International ayaa tiri: Waa wax aad looga xumaado in Taliska Mareykanka uu u muuqdo inuusan garaneyn cida weeraradiisa cirka ah dhab ahaantii dilayaan islamarkaana dhaawacayaan. Waxaa hubaal ah in tani ay tahay dembiyo dagaal oo Mareykanka ka geysanayo Soomaaliya”.
Mareykanka wuxuu Muqdisho, Balli-Doogle iyo duleedka Kismaayo ku leeyahay saldhigto qarsoodi ah, oo ay ka duulaan diyaaradaha wax duqeeya ee Drones-ka, waxaana dalka ka jooga askar lagu qiyaasay 500 illaa 1,000.
0 Comments Topics: afrosom drone strike farmaajo